6 Waxyaabood Oo Yar Yar Oo Burburiya Xiriirka Lamaanaha - Aayaha
6 Waxyaabood Oo Yar Yar Oo Burburiya Xiriirka Lamaanaha
Aayaha editorOctober 27, 2018
Waxaan halkaan inkugu soo gudbineynaa 6 dabeecadood oo burburin kara xiriirka lamaanaha.
Kalama hadashid lamaankaaga/lamaataada baahiyahaaga iyo waxaad rabtid
Waxaa qalad in lamaantaada aysan ogaan baahidaada iyo waxaad uga baahantahay xiriirka, haddi lamaantaada ay sameyneyso waxyaabo ku dhaawacaya ama kaa yaabiyay waxaa wanaagsan inaad u sheegtid.
Ballan ka bax
Waad dhaawacday lamaantaada/lamaankaaga marka aadan ilaalin ereyadaada waxay baabi’ineysaa kalsoonida xiriirka, had iyo jeer hubi inaad ka dhabeysid ballamahaaga sababtoo ah niyad jab yar ayaa keeni kara dhaawacyo waaweyn.
Lacag ku ciyaar
Inaad qarashka ugu ciyaartid si aananmacquul ahayn waxay keeneysaa dhibaatooyin dhaqaale oo saameynaya qoyska, lacagta muhiim ayay u tahay xiriirka, dhibaatooyinka lacagta waa waxa ugu weyn ee iminka sababa burburka qoyska, si macquul ah u isticmaal.
Been cad oo aad sheegtid
Waxaad aaminsantahay in beenta yare e cad ee aad sheegtid ay tahay mid aanan dhaawac lahayn balse waxay saameeyneysaa kalsoonida ay kuu qabto lamaantaada/lamaankaaga haddii ay ogaato, marka kasta daacadnimada ayaa wanaagsan.
Shaqada ood hormarisid
Shaqadaada waa muhiim, waa inaad isku dheeli tirnaan u heshaa xiriirkaaga iyo shaqadaada, had iyo jeer inaad shaqada hormarisid oo lamaantaada aad gadaal geysid waxay burburin kartaa xiriirka.
Fariimo badan iyo wicitaan yar
Lamaanayaal badan ayaa door bida fariinta inta ay toos isku wici lahaayeen, balse cilmi baaris ayaa sheegtay in wicitaanka lamaantaada aad wacdo ay faa’ido u leedahay xiriirka, wax ka wanaagsan ma jiro in cod ahaan la isku maqlo.
10 Waxyaabood Oo Haweeney Kasta Ay Ka Mudantahay Gacaliyaheeda Inuu Usameeyo
UGAAR AH DUMARKA: 6 Qaabood oo aad ku dejin karto Ninkaaga marka aad ka careysiisid
Talooyin loogu talagalay gabar kasta oo la kulanto nin xun
Haweenka Oo Si Fudud u Jeclaadaan Ragga Tilmaamahaan Leh